China Easy bee Aluminium Foil itinye n'ọdụ Akara Liner factory na ndị na-ebu ya | 品牌 名 / 公司 名
Ihe ọrụ na ọrụ nke ikpuchi ihe mkpuchi ahụ, nke a na-akpọkarị mkpuchi mkpuchi, na-ezo aka na mkpuchi na ihe mkpuchi nke nwere ike imepụta nsonaazụ akara siri ike na akpa ahụ. N'ebe a, ọkpọ na-ezo aka na karama iko, karama plastik na ite igwe. E nwere ụdị mkpuchi dị iche iche, gụnyere ihe mkpuchi, mkpuchi ikpuru, mkpuchi okpu, okpu na-emebi emebi, mkpuchi nrụgide. Ihe eji eme ihe na-ezo aka na ihe ndi nwere ike imechi mkpuchi na akpa ya, ihe ndi nwere ihe ufodu choro na ya bu ihe anaghi agha. Iji hụ na arụmọrụ nke ngwugwu a gbanyere agbanwe agbanweghị, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ejiri mkpuchi naanị ya na enweghị mkpuchi na ala nke mkpuchi ahụ, mmetụta akara ahụ siri ike iru. Ọrụ nke lining bụ nnukwu
Akụrụngwa: Aluminom foil, ihe nkiri, adhesives, ink, ihe mgbaze, wdg.
Ihe akara: PS, PP, PET, ma ọ bụ PE
Ọkpụrụkpụ ọkọlọtọ: 0.24-0.38mm
Standard dayameta: 9mm - 182mm
Karịsịa nkwakọ ngwaahịa dị ọcha.
Aluminom foil lids maka dị iche iche ngwugwu, PITA / HDPE / eyi / PS / PVC karama na karama.
Ihe ngbanye ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweta ikike siri ike iji mechie ọtụtụ ihe.
1. Akara na ịdị ọhụrụ
2. Gbochie oke onu okfu
3. Belata ihe ize ndụ nke ịpị aka, ịdọ aka na ntị na mmetọ
5. Mepụta hermetic akàrà
6. Gburugburu ebe obibi
Nke gara aga: Welie 'N' Peel
Osote: Otu ihe mpempe ọkụ na-ekpo ọkụ na-akwado ya